Ndi okirikiri di mma maka abs? - Mmega
Isi > Mmega > Mmekọrịta okirikiri - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Mmekọrịta okirikiri - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ndi okirikiri di mma maka abs?
Mbugharị mbụ nke sekit ọ bụla kachasị sie ike, mgbe ahụ, ha na-eji nwayọọ nwayọọ dịkwuo mfe dị ka ọnụ ọgụgụ ndị na-emegharị kwa ele na-abawanye. Nke a na-arụ ọrụ gịNgalabasiri ike ma debe ha n'okpuru ọgba aghara dị ogologo, nke bụ n'ikpeazụ ihe na-akpali uto ahụ.
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Taa, anyị na-aga n'ihu usoro ọzụzụ anyị zuru oke.
Oge a na otu n'ime ewu ewu: mgbatị ahụ mgbatị ahụ zuru oke. Ndi mmadu, ikwesiri ighota na anyi anaghi ekwu okwu banyere ime ime mgbe anyi na ekwu okwu banyere mgbatị. Oge ụfọdụ, ndị mmadụ na-eji okwu niile 'abs' pụtara ihe karịa.
Meanpụta akwara afọ okirikiri, ịpụta afọ agagharị, ikekwe ọbụlagodi na serratus, n'ihi na akwara ndị a niile dị mkpa ma tinye ha niile ma tinye ha n'ọzụzụ anyị ebe a. Ma olee otu anyi kwesiri isi kpebie ihe zuru oke? Ndi be anyi, imara na m kwuru ya na mbu; Enweghị otu mgbatị zuru oke. Mana anyị ga-agbakwunye ụfọdụ atụmatụ iji mee ka ọ dị mma.
N'ihe banyere abs, ọ bụ obere ihe omume - n'ihi na anyị maara na anyị nwere ọtụtụ narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku, nhọrọ ebe a ịhọrọ n'etiti mmemme dị iche iche. Ọ bụ ihe gbasara ijide n'aka na anyị kụrụ isi ọrụ yana ijide n'aka na anyị kụrụ usoro kachasị mkpa nke otu anyị chọrọ ịzụ akwara ndị ahụ. M na-amalite n’usoro.
Na-emega ahụ gị ọzọ dị ka mmegharị nke ala na-adịwanye arọ ma sie ike ka ịdị arọ nke ụkwụ gị na-esikarị ike karịa ibuli ahụ gị dị elu. Chọrọ ịmalite na ndị ahụ mgbe ị nwere ike kachasị ike. Chọpụta, ọ bụrụ na ịchekwaa mgbago ala gị na-agagharị na njedebe, ị gaghị enweta ọtụtụ ihe na ha.
Ya mere, anyị na-arụ ọrụ na usoro a nke ga-arụ ọrụ site na ọdịiche nke mgbatị ahụ a. Nke ahụ dị mma. Ekwuru m 'abụọ' n'ihi na m ga-agụnye ginner na ụdị dị elu nke mgbatị ndị a n'ihi na amaara m na ndị mmadụ nọ n'ọkwa dị iche iche chọrọ ịchụso nke a.
Iji mee ka ọ dị nfe dị mfe, a na m aga iji bandụ na ihe ndọpụta, ọbụlagodi na ị mee nke a n'ụlọ, ị gaghị enwe nsogbu ịga n'ihu. Ndị mmadụ, mgbe anyị na-ekwu maka ọrụ, abs na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ha anaghị eme nke ahụ.
Nke ahụ bụ ihe ọtụtụ mmadụ chere na ha na-eme. Ha na-eche na ha na-anwụ anwụ. N'ezie, ha na-achịkwa ijegharị n'akụkụ ọzọ.
Ha na-adọghachi gị ma na-achịkwa ya. Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị mezuru ọrụ a mgbe anyị nyere gị mgbatị zuru oke. Ha na-ejikwa ije na ụzọ ndị ọzọ.
Ha na-egbochi anyị ịmegharị n'akụkụ mgbe ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụ na-adịghị mma. Anyị nwekwara ike ịme mmega ahụ nwere ike ịme nke ahụ. Ha na-egbochi ntụgharị.
Anyị nwere ike ịnọ ebe a n'etiti ma mee ka mmadụ tinye aka anyị n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri ma mee ka ha ghara ịga ebe ọ bụla, a na-ekwu na isi ihe ọ funụ bụ enweghị na obliques. Anyị makwaara na ha nwere ike ijikwa ntụgharị. Can nwere ike ikwe ka ọ mee, mana n'okpuru njikwa gị.
N'ezie, ha nwere ike bụrụ isi ihe na - akpata ịda mba. Mgbatị ọ bụla na-eleghara akụkụ a anya anaghị arụ ọrụ ya, yabụ anyị chọrọ ijide n'aka na anyị gụnyere ọrụ a. Anyị ga-etinye ọrụ niile kwesịrị ekwesị ma mee ha n'usoro ziri ezi, ma gafee akụkụ ahụ niile ebe a ka ị ghọta ihe ị na-achọ ime iji lelee akwara ndị na-arụrụ gị ọrụ.
N'ihe banyere akụkụ ahụ, ọ nwere ike ịme mgbagwoju anya n'oge ụfọdụ, mana ọ na-adị mfe karị mgbe anyị mere ihe anyị na-eme mgbe niile na usoro 'zuru oke' na nke ahụ na-agbaji akara akwara. Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, akwara ngwakọta isii ahụ, rectus abdominus, bụ ihe amata nke ọma, n'ezie achọrọ m ka ị ghara ileba anya na ọ dị mfe ịchọpụta ya, mana kedu ụzọ eriri ndị ahụ na-aga? Kedu ihe jikọrọ ya? Ọ na-agbago na agbada, ugwu na ndịda, na-agbakwunye ngịrị ahụ na pelvis. Ọ na-eme ka mmegharị ahụ anyị dị, elu ma ọ bụ ala, anyị makwaara na anyị nwere ike iji uru a ma n'otu oge ahụ ghọta na nke a abụghị naanị ihe na-eme n'ihi na ị na-ele onye ọzọ anya. akwara ebe a dika obliques.
Ọ bụrụ n’ịlele anya na mpụta, nke bụ akwara ndị a na-ahụ anya n’elu akụkụ ime ahụ, ị ​​ga - ahụ na ntụpọ ahụ abụghị ihe oblique. N'oge oblique n'akuku. N'ihi ya ha nwetara aha ahụ.
Onye ọkwọ ụgbọ ala maka nke a bụ na ọ nwere ọrụ ọzọ dị mma na-enyere anyị aka ịtụgharị ma na-achịkwa ntụgharị dị ka m kwuru na mbụ. Yabụ anyị ga-enwe ohere ịme nke a ma ọ bụrụ na anyị agbaso eriri ndị dị ka anyị na-eme mgbe niile. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ugwu dị n'ime dị kpọmkwem na-eche ihu.
Ma ọ na-emekwa otu ihe ahụ. Ọ na-ejikwa ntụgharị na ụzọ ọzọ, ọzọ eze yana obliques n'aka nke ọzọ iji mepụta ụfọdụ ezigbo ihe mgbe ọ bịara n'ịgbagharị. Ma mgbe ahụ, anyị nwere ike lee akwara ọzọ ebe a.
Nke a bụ transverse afo. Nke a na-agba ọsọ karịa eriri eriri. N'ezie n'úkwù gị, echiche dị n'azụ a na-eme ka ị kwụsie ike.
Anyị chọrọ iji nke a n'ihi na anyị nwere ike ịme ya nke ọma site na ụfọdụ mmega karịa ndị ọzọ iji wee nweta ọtụtụ uru na ya. Aga m egosi gị otu esi echefu akwara isi, otu m si ahapụ, na Serratus. Ntughari - nke ahụ ziri ezi, ekwuru m 'ịmegharị' - oblique na serratus n'onwe ya nwere ihe kpatara ya.
O nwere ihe kpatara ha ji arụkọ ọrụ ọnụ, ma chọọ ịrụ ọrụ ọnụ; ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ime nke ahụ, anyị ga-eru ogo nke izuzu na mmemme ndị ọzọ anaghị eme. Yabụ ka anyị bido nke a site na ngagharị ala. Chetakwa, anyị kwuru maka otu anyị chọrọ isi mee ya. siri ike ma ọ bụ karịa dị ike ọzọ.
Mgbanwe nke elu ga-ebugharị nke a, yabụ ọ bụrụ na ị na-ele ụdị mbido ebe a, anyị ga-amalite site na iso-reverse crunch, na isi ọrụ lekwasịrị anya na pelvis a. Na mbido ekwuru m banyere otu ijikọ agịrịga ahụ dị na pelvis pụtara na anyị na-anwa iweta pelvis na ngịga ahụ, agbagharịla. Hụghị m ka m na-eme ya.
Don't hụghị m ka m na-agba ụkwụ m elu, gbadaa ala. Nke a ga-abụ usoro mmegharị a na-achịkwa hip. Ọ bụrụ na anyị ekewapụ pelvic ahụ, anyị ga-akụda ya nke ọma ma mee ka ha mee ihe ha kwesiri ime.
Ihe a bụ x-ray. Abamuru nke nghọta ra-ray bụ ụzọ abụọ. Nke mbu: O siri ike karie nihi na anyi kwesiri ibuli ibu di n’akuku anyi karie inwe iku ukwu.
Nọmba abụọ: anyị na-ebuli ha ogologo oge karịa mgbe anyị dina ala. Usoro ike nke omume ndị a dị iche; esemokwu na nghọta mbuli karịa ụdị mgbanwe ọ bụla na mbuli elu. Ọbụna nke ka mkpa bụ mmegharị ọzọ nke ijikọ ụkwụ ọnụ, na-agbakwunye ụkwụ, na-eme ka pelvis kwụsie ike site na ala ruo n'elu na ntinye nke ndị ntinye.
Igwe x-ray na-enyere anyị aka ime nke a. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụrụ na ịmalite ịmalite mgbatị ahụ zuru oke, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmalite ịmalite mgbatị ahụ dị elu, nke a bụ ebe ị ga-aga na mgbatị na-esote ebe a, nke bụ mgbatị anyị. ije. Ọ bụrụ na i lee ụdị mbido ebe a, anyị nwere ihe a na-akpọ gburugburu afọ okirikiri.
Nke a bụ mmega ahụ na-enye anyị nkwụsi ike nke elu n'ihi na anyị nwere ike ijide aka anyị na ala, nke zuru oke maka ndị mbido na-eme mgbatị ndị a. Anyị ga-eme okirikiri n’oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ọ siwanye ike, ka anyị kwụpụ ya ntakịrị gburugburu gburugburu; Ka ọ dị ugbu a, nke a dị ka ụkwụ kwụ ọtọ nke anyị maara na o siri ike karịa ogologo ụkwụ, mana anyị ga-ejedebe na obere onye na-agbakwunye ntụgharị ụkwụ iji mezuo ntụgharị a ị kwesịrị ị na-ahụ atụmatụ nkwụsi ike na-agbanwe.
Anyị kwuru ya ná mmalite. Anyị anaghị anwa igbochi ntụgharị gburugburu ebe a. N'ezie, anyị anaghị anwa ime ihe mgbawa na ntụgharị, mana anyị na-anwa ijikwa ntụgharị, ole ka anyị nwere.
Ọzọkwa, mgbe anyị leghachiri anya azụ, anyị ga-amalite ịhụ ụdị mgbatị ahụ a na-ewere, ma n'ụdị mbido ma ọ bụ n'ụdị dị elu, anyị na-aga izute abụọ ọrụ na usoro anyị chọrọ ka ihe a rụọ ọrụ kacha mma . Ugbu a, ka anyị nọrọ na isiokwu ntụgharị ma gafere na mkpọda. Ọzọkwa, ọ masịrị m iji akwara ndị ahụ ma a bịa n'ihe mgbatị ahụ dum, na-arụ ọrụ ahụ ogologo oge, ọzọ, echere m na ike gwụrụ gị ịme ha nke ọma, yabụ, ihe anyị ga-achọ ịme na ọkwa mbido, nke a bụ ikpere-ikpere.
Isi na-elekwasị anya ebe a bụ na ọrụ. Anyị na-agbagharị agbagharị ebe a ma anyị na-ebugharị ya na eriri nke ndị nwere mmasị. Buru n'uche na bevel dị n'ime na bevel mpụta ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ntụgharị ahụ n'otu ụzọ, ụzọ ọzọ ga-eme ka ntụgharị ahụ laghachi n'akụkụ ọzọ.
N'ịtụgharị na nsụgharị siri ike karị, nke kachasị elu ebe a, anyị na-elezi anya ugbu a ihe a na-akpọ oke mmiri ozuzo. N'ebe a, anyị ga-eji teepu ahụ na nkwụnye ihe nkwụsị. Ihe anyi choro ime ebe a bu itinye mmegide.
Mepụta ntụgharị. Echiche bụ, n'agbanyeghị ihe ị na-eme maka iwu gị, ọ ga-aka mma ka ị na-agbagọ ma ọ bụ na-agagharị na aka ekpe ma ọ bụ aka nri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ ha ihe. Nke a bụ ohere magburu onwe ya ma ka anyị na-arụ ọrụ ndị a, ọzọ, nke a bụ onye mbido, nke a bụ nke dị elu.
Nwere ike ịhụ nke a na-ewere nwayọ nwayọ. Ugbu a, anyị na-amalite ịga n'ihu ma na-esi na mmegharị niile nke ala na-agagharị na-agagharị n'etiti. Anyị ka na-agụnye mmegharị nke ala, mana anyị na-ejikọta ya na mgbago elu.
You nwere ike ịhụ na na mbido anyị na-eme ihe a na-akpọ Elbow Toknee n'akụkụ nke ọzọ. Nke a bụ ihe dị iche na plank. Know mara na abughi m nnukwu osisi nke osisi mgbe ọ bịara n'iji ya emega ahụ.
Ọ bụrụ na anyị maara na anyị nwere ike ijide plank maka nkeji 2, 3, 4, yabụ emela ụdị siri ike nke plank ahụ. Nke a bụ ebe mbụ m ga - enwe usoro onye mbido n'ihi na ihe anyị na - eme ebe a na - agbagha nkwụsi ike na ntụgharị mgbatị ahụ. Ọrụ a nke akwara afọ na-egbochi obere ala anyị ịda mbà mgbe anyị buliri isi abụọ nke kọntaktị na ala na-eme nke a maka ndị toro eto, anyị ga-agbago, gbadaa na elu, mana anyị ga-aga ng ime ha n'otu oge, na anyị ga-tinye a obere ighikota na a scissor v-elu.
N'ebe a, anyị na-anwa ime ka mpempe ụkwụ na-aga na V-elu na-aga, nke dị ntakịrị mfe karịa ka ọ dị ka mgbago elu na-enyere aka belata ogwe aka nke ụkwụ metụtara toso. Ma ekwela ka a ghọgbuo gị. Nke ahụ adịghị mfe.
Mana enwere ike ime ya, ọkachasị n'oge a na mgbatị ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-arụ ụlọ mgbatị ndị a ebe a. Kedu otu ị na-eme, nke a bụ mgbatị ahụ siri ike, mana ọ ga-aba uru, m kwere gị nkwa, nke a nwere ike bụrụ akụkụ kachasị amasị m nke mgbatị ahụ.
Offọdụ n'ime ihe omume m kachasị amasị m ebe a na-eme site na ntụgharị site n'elu ruo na ala, dị ka ọtụtụ oge a na-akwagharị ha elu-na-ala, na ụkwụ anyị na kọntaktị na ala. Omume izizi ebe a, ọ bụrụ na inwere karịa onye mbido, ga-arụ ọrụ na mgbochi ntụgharị na ọrụ nke abs. Nke a bụ ụzọ ọpụpụ osisi oak a.
N'ebe a, ịchọrọ ịgbatị n'ihu ahụ gị ma gbatịa ruo ogologo oge o kwere mee. Will ga-apụ dị ka i nwere ike na-enweghị ogwe aka gị laghachi azụ na ntụgharị ihu. Y’oburu n’inwe ike, o buru na i gha pu ighari ighari, ogwe aka gi agaghi adi.
Y’oburu n’achoputa na ha na achighari na isi ihe njigide oge obula, I ghaghi ike. Ma ọ bụ ịkwesịrị ibelata nguzogide nke eriri ahụ ma ọ bụ ịkwesịrị ịhapụ obere obere. Vinggafere n'akụkụ dị elu ugbu a na-enye anyị ohere dị ukwuu iji bụrụ ihe mgbawa.
N'ebe a, anyị nwere ike ịme ihe a na-akpọ swinghammer swing, mmeghari mgbawa na-agbawa agbawa na ala. ihe mere m ji hụ mmeghari mmegharị a nke elu-ala. Pụrụ ịhụ ebe a; M na-eme ọtụtụ ntụgharị.
Ọbụna site na - ị nwere ike ịhụ mgbatị ụkwụ na ala iji nyere m aka inweta ike na ume dị ka o kwere mee. Nke a nwere ike ịbụ bọmbụ ọgwụ na-atụba mgbidi ebe ị nwere ike igosipụta onwe gị n'ike zuru oke n'ihi na ị na-atụfu bọl ahụ. Dị ka m kwuru, anyị ejedebeghị na mmemme ndị a.
Enwere ọtụtụ nhọrọ, mana ọ bụrụ na ị nwere ike Mindset ghọta ihe kpatara anyị ji họrọ ebe a, mgbe ahụ ohere ị gbakwunye mgbatị dị iche iche ebe a ga-enweghị njedebe. Ugbu a anyị agafeela n’elu ngagharị n’elu, anyị nwere mmega ahụ. Naanị ịkọwa ọdịiche dị n'etiti onye mbido na ọkwa dị elu site na nguzogide teepu ejiri.
Chee na ị ga-apụ ma zụta teepu ọzọ, ịkwesighi. Just ga-agbachi ya n'ụzọ dị iche. Ọ bụrụ na m nwere ike ịhụ site na ya n'ụzọ ahụ, anyị nwere otu otu anyị ga-alaghachi, dịka ị hụrụ m ebe a na nsụgharị ntinye.
Ọ bụrụ na m chọrọ ime ka nke a sikwuo ike karịa, ihe m ga - eme bụ ịgbanye ya n’elu mmanya ya wee were aka m na - eje ozi na aka m ọ bụla ma mekwaa ka nguzogide ahụ dị okpukpu abụọ site na ibelata teepu a. Mana agbanyeghị, enwere ihe abụọ iji lekwasị anya na elu a, mmegharị ala. Nke mbụ bụ otú anyị si eme ya.
Won't gaghị ahụ ka m na-eme ya. Anaghị m anọdụ ala n’azụ ịkwado ụkwụ m. Anaghị m ekwe ka ikpere m daba n'akụkụ ikiri ụkwụ m. Ọ bụrụ na m mee nke a n'ụzọ ziri ezi, ọkpụkpụ m ekwesịghị ịga n'akụkụ ikiri ụkwụ m.
Anyị chọrọ ime ihe mmewere ahụ kwuru. Nke ahụ kwuru, dọkpụ ngịga gị ma chee ihu na pelvis gị site na ntụgharị ọ bụla, ị gaghị eme ihe ọ bụla. Ihe nke abuo ichoro ilebara anya bu ihe na - eme transverse afo ebe a.
Cheta, ekwuru m banyere akwara a na mbido. Nke a bụ nnukwu ohere na ebe ịmalite ịrụ ọrụ na ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ànyị ga-enwe ike iguzosi ike na isi ihe siri ike tupu anyị emee nke a? N'ezie, ọ bụrụ na ị buru ụzọ nwee esemokwu a, ị gaghị enwe ike ịchọ ịdaba na mgbatị ahụ.
Iji mee nke ahụ, ị ​​chọrọ ime ka afọ juo afọ. Olee otú ọ ga-adị gị ma ị hapụ onwe gị? n’oké osimiri nke mmiri jụrụ oyi? Chọrọ ịbanye na iha aha n’ihi oyi dị. Want chọrọ ime otu ihe ahụ ebe a.
Ha na-agbatị ma gbasie ike ma jiri eriri dị n'ime ya maka nkwụsi ike. Ozugbo ọ ruru ebe ahụ, ị ​​ga-akwudata ala gaa pelvis. Anyị na-arụ ọrụ mgbatị ndị a zuru oke n'akụkụ n'akụkụ ka ị nwee ike ịwụli azụ ma ọ bụ mee otu ma ọ bụrụ na ịchọrọ Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ị nọ n'ụzọ ziri ezi.
A sị ka e kwuwe, ebe ọtụtụ ebe a ga-anọ ga-agafe ebe a, nke anyị erubeghị. Anyị nwere otu mgbatị ahụ. Anyị chọrọ ịrụ ọrụ na Serratus.
Ekwurala m banyere itinye aka ya na ijikọ aka na ihe kpatara anyị ji chọọ ime ya. N'ezie, ọ bụ akụkụ nke Atọ n'Ime Otu Dị Nsọ dị ka anyị kwurula banyere ya n'isiokwu bu nke a ụzọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na anyị nwere ike ime nke a n’ụzọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, m chọrọ ka ị mee mgbatị ahụ a na-akpọ Plank Push-Away ebe a. Ihe anyị na - eme bụ ịbịnye onwe anyị n’ime ọnọdụ ahụ - mana ịgaghị ịme osisi iji mee ihe ọzọ - nke ahụ pụtara na anyị ga-eme ka ihu anyị banye n’ime ala. Ka ubu ubu wezuga onwe ha.
ms 150 ọzụzụ
Bido site na ndị pịakọtara ma kewaa ha dịka ị nwere ike site na ịdọpụta ha site na ịkpụ aka gị n'ime ala. Will ga-eche na nke a na - eme ka uru ahụ dị na serratus nke na - eme ka nkwụsi ike nke ubu dabere na ngịga gị dum. Nke a dị mkpa.
Nke a bụ ọrụ nke isi kwụsie ike. Mee nke a mgbe ị na-enyere aka ịzụlite mọzụlụ a na-ahụ nke ọma ka ha na obliques na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ka nke a sie ike karị, anyị nwere ike ịpịa plank a.
Ka m na-apị rịbọn ahụ n'ahụ pụọ n'ahụ m, ọ bụ mmụba mgbakwunye ahụ. Ekwela ka ọ pụọ n’ihu gị; na-agbanye onwe gị n'ihu ma na-aga 2 'ma ọ bụ 3' ọzọ. Ga-eche n'ezie na Serratus na-arụ ọrụ ahụ.
E nwere ya ụmụ okorobịa. The zuru okè ab mgbatị na akwụkwọ Ma ị na-eso mbido version na ị na-ahụ ebe a ma ọ bụ ndị elu version na m ga-egosi gị na sekọnd ole na ole, nke bụ eziokwu bụ, ị ga-aghọta na ọ dịghị ihe dị ka 'zuru okè '. Anyị maara na anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ mmemme omume ndị ọzọ nwere ike ịgụnye mgbatị ahụ a, mana ọ bụrụ na ị ghọtara ihe kpatara ị ji eme ihe ị na-eme yana otu ị si eme ihe ị na-eme, ị nwere ike ịbịaru oke nso.
Nke a bụ m kacha mma na-agbalị. N’ịchọ mmemme n’ebe anyị na-eme otu ihe ahụ, anyị na-anwa itinye sayensị n’ime nhọrọ nke ọrụ anyị n’ihi na anyị maara mkpa ọ dị. Mmemme anyị niile n’otu ụkpụrụ.
Ha niile dị na ATHLEANX.com. Ọ bụrụ n’ị na-achọ mgbatị ahụ zuru oke, ị ga - ahụ ha niile na ọwa a.
Ihe ị ga - eme bụ ijide n’aka na ị debanyere aha ma gbanye ọkwa gị ka ị wee ghara ileghara ihe ọ bụla anya. N'otu oge ahụ, aga m eme ike m niile ijikwa gị ihe ọ bụla. Naanị hapụ ya na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a, m ga-anwa ime nke ahụ na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Ọ dị mma, lee gị n'oge na-adịghị anya.
Ime mgbatị ahụ dị nkeji 20 ọ dị mma?
Uru nke ime airi abụọ-Nkeji, lekwasị anyaisi mgbatịdị ka nke a kama ịgwakọta naisirụọ ọrụ na sekit zuru ezu ma ọ bụ mee obere ogeabs mgbatịbụ ike ọgwụgwụ zuru okeafọmọzụlụ ruo n'ókè nke ọdịda nke ahụ, nke ga-eduga na ike kawanye mma, Kara na-akọwa.Eprel 18 2020
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Yabụ kedu ihe ị na-eme n'ụbọchị iri abụọ na abụọ sochirinụ? Enwere m olileanya na ihe m ga-egosi gị ebe a taa.
Enweela m mgbatị ụbọchị 22. Ị ma nke mere? Anyị emeela ka ihe niile dị mfe n’ihi na m ga-ewepụ ụfọdụ ihe ngọpụ. Anyị agaghị eji akụrụngwa ọ bụla ma ọ bụ nwee nsogbu gbasara ụdị mmega ahụ niile.
Anyị ga-enye gị mgbatị nke na-eme ka ogo gị nwee ike ma m ga-ahọrọ ụbọchị 22 dị ka ụbọchị m na ihe mgbaru ọsọ m n'ihi na anyị maara na ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 22 iji zụlite àgwà. Ọ bụrụ n ’ị ga - arụgide mgbatị ahụ a, ọ gaghị adi anya - ọ bụrụ n’ ime mgbatị ahụ ụbọchị iri abụọ na abụọ n’usoro, onye ma? Ikekwe ị na-aga n'ụzọ ọhụrụ ị raara onwe gị nye na ahụike n'ihi na ị nwere ike ijide ya. Anyị ga-agbanwe ya na ọkwa gị ugbu a.
Anyị na-eme nke a site n'iji ụdị mmerụ. Yabụ site na ịmịkọrọ mmiri, enyere gị ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ, ma ọ bụ oge setịpụrụ iji lekwasị anya ma gbalịa ịtachi obi maka mmega ahụ ọ bụla. Omume isii ebe a na-agbaso usoro mgbatị afọ anyị.
Ọ bụrụ n’ị jisie ike nweta oge a, ị ga-enweta ego ọzọ. 10 sekọnd na ndị ọzọ na-eme gburugburu. Ndị mmụta dị elu nwere ike ma mee nke a ma nwee ike imeri ihe ịma aka n'agbanyeghị agbanyeghị echiche ha.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu, ị nwere ike ịnwụ n’etiti etiti ị nọ na mmalite nke mgbatị ahụ gị, ị ka nwere ike ịnwale nke a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ mgbatị ahụ dị ka ihe ọzọ, aga m ejikọ ya na ala nke nkọwa dị n'okpuru ebe a, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya gakwuru ya! Ọ bụrụ na ị kpochapụrụ mkpochapụ na nke mbụ ọ bụla na mmega ahụ, yabụ gịnị? Ka na-enweta ezigbo mgbatị ahụ. Ya mere, ndị mmadụ, m ga-etinyekọrịrị mmemme niile maka ụmụ nwoke na m ga-akọwa ihe nke ọ bụla na-arụ.
Chetakwa, anyị ga-enwe ebe mkpochapụ dị iche maka nke ọ bụla. Ka anyi bido. Ọ dị mma, fi mmega ahụ izizi: ikiri ụkwụ n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Anyị nwere mgbatị mgbatị afọ. N'ihi gịnị? Maka na anyị were ọkara dị ala wee zere ya na ọkara elu siri ike. Ya mere, n'ikiri ụkwụ m gaa na mbara igwe, ị nwere ike ịhụ m na-eme ya Ebe a, mgbe Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido ma chọọ ịnwale nke a, ị nwere ihe abụọ ị ga-eme.
Chọrọ ịkwanye onwe gị, ogologo site na uko ụlọ, na hips gị pụọ n'ala, nke dị ntakịrị karịa. Mee nke a maka sekọnd 45. Nke a bụ ọkwa absorbance gị.
Ọzọkwa, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmechaa ya. Will ga-aga ozugbo na mgbatị ahụ ọzọ. Ọ bụrụ n ’ime ya maka sekọnd iri anọ na ise enyere gị ezumike nke abụọ 10 ma ị ga - emegharị mmega ahụ ọzọ.
Keep na-eme nke a, na-ezu ike maka 10 sekọnd mgbe ọkwa ọ bụla gwụchara, ruo mgbe ị ga-ada na sekọnd 45, wee gafere n'ọkwa ọzọ. See hụrụ, otu a ka anyị ga-esi zute ndị ọkwa ọkwa niile. Onweghi onye nwere ike gbanahụ mgbatị dị mfe ebe a.
Ọ na-aga n'ihu, ugbu a ọ na-amalite ịtụgharị site na ala ruo n'elu. Ọzọ obere ọkara na-agagharị, oge a na-agbagharị na ọkara elu ofu. Anyị na-eme nke a site na ịzọ ụkwụ.
Ya mere lee, nke a bụ ebe anyị na-eburu ahụ anyị, anyị na-ejide isi ahụ anyị ebe a site na idobe ihu anyị na ala na ubu anyị na-atụ aka na ala. Ma anyị ga-agbagọ ụkwụ anyị ka m na-agafere ya, na-agbanwe site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Anyị na-aga oge mkpochapụ nke 45.
Ọ bụrụ n’ịnwere ike weghara sekọnd iri anọ na ise, mee ya ọzọ rue mgbe ị gaghị enwe ike. Na-esote, ka anyị gafere na usoro etiti anyị. N'ebe a, anyị chọrọ ịdakwasị elu na ala ma gaa ọnụ, anyị nwere ike ime nke ahụ na ihe anyị kpọrọ X-Men crunch anyị.
Maka oge mbụ, mkpochapu abụghị ihe mgbaru ọsọ oge, kama ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ugboro ugboro. Ma ugbu a ị ghọtara ihe nke ahụ pụtara. Ihe mgbaru ọsọ a bụ 12.
Ga-eme mmega ahụ ebe a. Ọ dịghị mfe, mana ị nwetaghị ọkwa zuru ebe a. Naanị ịchọrọ ụkwụ gị na aka gị niile wee laghachi na ọnọdụ 'X' ahụ, ụkwụ gbasasịa ma na-emegharị ugboro iri na abụọ ebe a bụ ebumnuche gị mkpochapu, anyị kwesịrị iti akwara ahụ n'ihi na ha doro anya na m na-agwa gị ihe niile oge.
otu esi eji ihe nyocha nke obi
Ha taper a n'etiti akụkụ. Yabụ ihe anyị na-eme bụ eriri eri agịga ọzọ. Usoro ọzọ nke agịga ahụ ga-ewere eri Mkpịsị ahụ agịga ahụ egosiri m ebe a tupu, ma gị 'Anyị na-aga n'ihu, na aka ekpe na aka nri.
Ya mere, were ya ebe a, ị ruru maka igwe igwe, site ebe a ị ga-etinye agịga ahụ wee rute n'aka nri ya. Echefula nguzozi gị. Mgbe ahụ, anyị ga-apụta ọzọ, gbadata, nọdụ ala wee megharịa n'akụkụ nke ọzọ.
Gaa gbagoro, gbadata, gafere, si n'azụ pụta, nọdụ ala n'etiti ma laghachi. Nmechapu ebe a bụ ugboro ugboro, ma otu ugboro. E nwere 10 n’akụkụ ọ bụla.
Lee ma ị ga-emeli ya n’ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike; ezigbo oru. I nwetara ego 10 n’akuku nke ozo.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-aga n'ihu na mgbatị ahụ ọzọ. Ọ dị mma, anyị nwere abụọ ọzọ ebe a. Uzo nke elu-ala na-ebu uzo.
Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya “Ọ bụrụ na elu-elu bụ ofu top na-akpụ akpụ ala, ugbu a ọ na-agba mbọ na-na ala dị ka anyị otu ebe dị ka o kwere na wepu elu-ala n’elu. Ugbu a, jackknife ga-ekwe ka anyị mee nke a. Enwere obere ije na ụkwụ, mana ọ bụghị isi na-elekwasị anya.
Yabụ ebe a ka anyị banyere n'ọkwa ahụ, ị ​​ga - ewepụ aka gị wee pụọ, ị ga - abatakwa, mee crunch site n'elu, hapụ ụkwụ ka ọ gafee ntakịrị karịa nke ọzọ, wetuo obi ọzọ , jeekwa akuku nke ozo. Keep na-agagharị ihu na azụ n’ebe a. Oge eruola ọzọ.
Anyị na-anwa ije na jackknife a maka sekọnd 45. Ka anyị gaa maka ya. Mee ọtụtụ dị ka i nwere ike.
Ọ bụrụ na ị kpochapu, ị ga-enwe otu mmega ahụ fọdụrụ. Odi mma, n’ikpeazu anyi aghala ịrị elu inwe d ọzọ mana oge a na ntụgharị. Anyị na-eme ya na ihe anyị kpọrọ igwe kwụ otu ebe.
Ndị mmadụ na-agba ịnyịnya ígwè oge niile, ha na-agbakarị ọsọ ọsọ nke na ha anaghị etinye uche ma ọ bụ na-eme ka akwara ha sie ike n'ụzọ siri ike, ma ọ bụ na ergometer a manyere anyị ime ya. Ya mere, m dinara ala ebe a n'ala, ikpere na-aga ogo 90, aka na-aga n'azụ isi m, na-ejide ma ọ bụ na-adọta n'olu m, na ihe m na-achọ ime m na-ejide obere mgbatị ebe a n'elu - ugbua nkwekọrịta - wepụrụ ala, ubu ubu si n'ala ma m na-anwa ịtụgharị site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Ikpere aka na ikpere na-abụghị ikpere, ikpere aka na ikpere na ikpere na ikpere.
Emegharịna ala ọkara. Debe ebe a, ya mere aha ahụ. Mana ihu ọma anyị chọrọ ijide n’aka na anyị na-agbagharị si n’elu rue ala.
Nke ahụ bụ 30 sekọnd. Nke ahụ adịghị mfe; ọ na-esiri anyị ike karịa ịpịa ihe ndị ahụ n’otu n’ime anyịnya igwe ndị ahụ. Ga-eme ọtụtụ ihe na ya. 30 sekọnd 30 ikpochapu.
Ọ bụrụ n’ị ga - eme ya rue njedebe - n’ezie, ọ bụrụ n’anyị enweghị ike ime ya rue njedebe - mgbatị gị agabigala. All nri e ị nwere ya. Mfe ọzọ.
Anyị ga-ewepụ ngọpụ niile. Ngwaọrụ a, mgbanwe mmega ahụ, mana ọ dịghị mfe. Echeghị m na ọ ga-adị mfe.
Ọ dịghị ihe kwesịrị ya kwesịrị ịdị mfe. Gbalia ya, n’agbanyeghi onodu ike i no. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ gị karịa ụbọchị 22 wee jiri nke ahụ wee bido.
Ndị be anyị, ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme ga-eme ka sayensị laghachi n’ọrụ, zụọ gị otu ị kwesịrị isi mee ya, mee ka uru ahụ rụọ ọrụ otu ha chọrọ ịrụ ọrụ; Gaa na ATHLEANX.com wee nweta mmemme ọzụzụ ATHLEANX anyị. Nke ahụ bụ ihe m kwuru.
Anyị na-azụ gị dị ka onye na-eme egwuregwu. Nke a bụ ntakịrị nwetụrụ anya. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọtala isiokwu a na-enye aka, biko hapụ echiche gị n'okpuru na isi mkpịsị aka m maara ihe ị chọrọ ịhụ ebe a na ọwa a, m ga-eme ike m niile ikpuchi ya maka gị ụbọchị na izu bia.
Ọ dị mma, jisie ike. Ka ahụ oge n'adịghị anya.
Kedu ihe mgbatị ahụ dị ike?
Ndị 7Omume Ab na -esi ike
Ọkọlọtọ Dragọn. Dina ihu na bench ma jide oche dị n'akụkụ ntị gị ka nkwonkwo aka gị wee hulata ma aka gị dị n'akụkụ isi gị.
Cross-Climber with Feet na Switzerland Ball.
Iguzo Barbell Rollout.
Switzerland-Ball Jackknife Na Push-Up.
Jenụwarị 27. 2015
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.COM. Nụtụla ka mmadụ kwuru na m nwere ike ịhapụ ọrụ ogologo ụbọchị niile? Ọ bụrụ otu a, ọ ga - abụ na ha anaghị eme ihe ndị na - adịghị mma ha ga - eme iji merie ụmụ okorobịa kachasị toro eto.
Ndị be anyị, lee, ị nọ n'ụdị ngwa ngwa. Ole n’ime ha ka ị ga-eme? Yabụ na ị nwere ya. Atụla ụjọ.
Gbalịa ya. Otutu ka inwere ike. Echegbula ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ime ha niile. Kpatara nke ahụ bụ isi ebe a ụmụ okorobịa.
Ihe niile banyere iwulite ike gị. Na nka nke aka gi, oganihu, oganihu, oganihu. Anyị ga-azụ gị dị ka onye na-eme egwuregwu.
Ma ọ bụ naanị akwara afọ anyị ma ọ bụ ahụ anyị niile. Nke a bụ ihe ATHLEANX gbasara. Nke ahụ bụ ihe ọwa a banyere.
Nke a bụ ihe usoro ọzụzụ m gbasara, ma ọ bụrụ na ịnweghị ma chọọ ịmalite ịmalite mọzụlụ na-eme ka abụba si n'isi ruo n'ụkwụ. Akwụsịla ebe a n'etiti. Wee gaa ATHLEANX.COM wee nweta usoro ọzụzụ.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọtala edemede a nyere aka, maọbụ ọ bụrụ na ịmara na ị nwere ike ịma aka ndị enyi gị na ụfọdụ n'ime omume ndị a siri ike, siri ike, soro ha kerịta, maa ha aka ma mee ka m mara etu ị siri mee. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọbụla ịchọrọ ịhụ bụ nke gị, ọwa a bụ nke gị. Mee ka m mara n'okpuru ma mee edemede banyere ya.
Ime 7 nkeji oge mgbatị arụ ọrụ?
Ozi ọma ahụ: Ọ bụrụgodi na ị dị mkpụmkpụ oge, ị ka nwere ike ịba ururụpụta. Ọ bụ ya mere Dane Miklaus, CSS.S., onye guzobereỌzụzụ ỌR.Studio, kere aAsaa-nkeji oge mgbatịị nwere ikemeeugboro ole na ole n'izu.Mar 27 2021
Ekwesịrị m ịmega ahụ m kwa ụbọchị?
2. Na-azụabiakwa ubochi. Dị ka akwara ọ bụla,abiachoo ezumike! Nke ahụ apụtaghị na ịnwere ike'Mee ọ rụọ ọrụab giakwara n'ogenke gikpoo ahụ ọkụomumedị ka Planks, Inchworms, na nguzozi na nkwụsi ike ndị ọzọomume, ma ịkwesighi ịzụ ha kwa ụbọchị.Ọnwa Ise 27, 2019
Nwere ike nweta ABS naanị ibu arọ?
Gịemelanweeibi na mgbatị ahụ ma ọ bụ nọrọ agụụ gbuo onwe gịnwetakaisii mkpọ. N'ezie,ị nwere ike imeya site n'ụlọ yabodyweightomume na nri ụtọ. O kwere omume — n’ihi nagị, maka onye ọ bụla, maka onye ọ bụla.03.08.2017
Ogologo oge ole ka mgbatị ahụ kwesịrị ịbụ?
Iji nweta uru nke ike, kwụsie ikeisi, na-achọ ma ọ dịkarịa ala 30Nkejinkemgbatị afọna ihe ịma aka niile anọ nkeafọmọzụlụ. Dị ka okwu na-aga,Ngalabaemere na kichin. N'agbanyeghị nke ahụ, mmega ahụ dịkwa mkpa.19.08.2019
Nwere ike ịnweta mkpọ isii site na nkwalite ụkwụ?
Otu esi emenghọtaụkwụ na-ebuli elu? E nwere ọtụtụ ụzọmeenghọtaụkwụ na-ebuli eluezighi ezi ma kwesiriị na-emeọ bụ eziokwu, ọ ga-emenweta gịkaisii mkpọna ọbụna melite adịgide adịgide, nakwa dị ka ubu na azụ definition. Angghọtaụkwụ na-ebuli eluso n’ime omume ndị kacha sie ikegịkwesiri itinye oru kachasi nma.
Mgbatị ahụ nke oge 7 ọ dị mma maka ụkọ ọnwụ?
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụifelata,7-Oge Nkejinwere ike inyere aka, yana ahụikenri. Ọ bụ ihe dị oke egwu, calorierụpụtanke ahụ ga - enyere aka ịwụ pound ma gbochie ha.23 nke 2020bọchị 2020
I kwesiri ime mgbatị ahụ nke nkeji 7 kwa ubochi?
Ee, Jordan kwuru, karịsịa ma ọ bụrụgịAdịghị arụsi ọrụ ike ugbu a. 'Cheedị ịnọdụ alaNkeji 7vesosNkeji 7nke mmega. O doro anya na mmega ahụ bara uru. ' MagịAga m enweta nsonaazụ kacha mma ma ọ bụrụgịikwugharị ya7-Nkejisekit.Ọnwa Ise 18, 2015
Kedu ụdị mmega ahụ bụ circuit AB?
Egwuregwu Ab Circuit. Sekit ọ bụla na-agụnye ụfọdụ ụdị mgbanwe dị iche iche, n'ihi na ha dị ukwuu na rụọ ọrụ gị dum; a crunch ma ọ bụ ụkwụ mbuli mgbatị, n'ihi na ha na-etinye extra mesiri ike na rectus abdominis na obliques; na mmega ahụ siri ike maka ọkụ calorie.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịme maka ABS?
Mee sekit atọ na ngụkọta Nke ọ bụla n'ime mgbatị ndị a bụ obere sekit ị nwere ike ịme na ngwụcha mgbatị gị. Emere sekit ndị ahụ iji rụọ ọrụ ọnụ ọgụgụ kachasị nke akwara akwara ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè dị ka o kwere mee, n'ihi ya, ị ga-eme ihe anọ ahụ niile n'usoro, na-arapara na reps na oge ezumike zuru ezu.
Kedu ihe mgbatị AB kachasị mma maka ahụ gị?
Abdị mmega ahụ kachasị mma maka m ga-abụ ihe omume 4 ruo 5 dị iche iche na-akpali akụkụ dị iche iche nke isi site n'akụkụ dị iche iche na usoro ije, emere na sekit na-enweghị ezumike n'etiti mmemme ọ bụla na oge ezumike 2 nkeji mgbe sekit ahụ gasịrị.